Banyere Anyị - Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd.
Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd (Shida Carbon Group) e guzobere na 2001, mbụ Shanxi Jiexiu Shida Carbon nke e tọrọ ntọala na 1990. Shida Carbon bụ a Hi-Tech Enterprise pụrụ iche na nnyocha na mmepụta nke carbon ihe.Ugbu a, anyị nwere 4 mmepụta osisi na kwa afọ ikike nke 50,000mt, ekpuchi zuru ezu usoro nke graphite electrode na elu teknụzụ na akụrụngwa.
Ngwaahịa bụ isi nke Shida Carbon bụ: Dia.450-700mm UHP Graphite Electrode, Isotropic Graphite, 600X800X4400mm Graphite Cathode, Graphite Anode, na Obere Ọka Ọka.A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọkụ eletrik, ọkụ ọkụ ọkụ na-agbaze, fotovoltaics anyanwụ, EDM, kemịkalụ dị mma, ọgwụgwọ okpomọkụ dị elu, nkedo ziri ezi, mmepụta aluminum na wdg.
Taa Shida aghọwo ihe mba ụwa na-eduga elu-tech, gburugburu ebe obibi enyi na enyi ụlọ ọrụ carbon.Ma ugbu a, site na nkwado siri ike sitere n'aka ndị ọchụnta ego ọhụrụ anyị, anyị na-aga na nrọ kachasị anyị nke ịbụ akara kacha elu n'ụwa n'etiti ụlọ ọrụ carbon.A kpaliri anyị site n'echiche anyị na-emepe emepe nke Shida na-ejide mgbe niile ma na-aga n'ihu na-emepụta ihe ọhụrụ na ịga n'ihu n'ọdịnihu.
Shida Carbon si R&D center e hiwere na 2005 na a ghọtara dị ka a mpaghara Enterprise technology center na 2009. Mgbe afọ isii nke ewu, na R & D center nwere ọtụtụ top nnyocha talent na mbụ-klaasị akụrụngwa na carbon ụlọ ọrụ, na-apụta anyị ụzọ dabere na. Nchikota nke mmepụta, agụmakwụkwọ na nyocha.
Shida Carbon anọwo na-eguzosi ike ruo ihe karịrị afọ 30, gbara akaebe na mmepe nke ụlọ ọrụ carbon nke China, yana dịka otu onye so na Shida bụ aha mgbe niile na nraranye na mmasị.
Chart usoro mmepụta
Shanxi Jiexiu Shida Carbon Co, Ltd. tọrọ ntọala.
Guanghan Shida Carbon Co., Ltd. tọrọ ntọala.
Decang Shida Carbon Co., Ltd. tọrọ ntọala.
Meishan Shida New Materials Co., Ltd. tọrọ ntọala.
Sichuan Shida Fine Carbon Co., Ltd. tọrọ ntọala.
Meishan Shida's 20,000mt / afọ 550mm na n'elu UHP graphite electrode oru ngo gụnyere na National Torch Programme.
Akụkụ nke Decang Shida's phaseⅢ240KA LWG graphitization unit malitere ọrụ.
Shida Carbon nwetara nyocha abụọ nke sci-tech rụzuru site na ngalaba Sayensị na Teknụzụ Sichuan.
Ọhụrụ stratejik investor batara n'ụgbọ, kwadoro mmepe nke Shida ọdịnihu.
New oru ngo nke anode ihe graphtization lauched, na-abanye ọhụrụ azụmahịa akporo nke ike batrị.